Aqalka hoose ee Congress-ka maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyey labo qodob oo kala ah: 1) - Inuu ku takri falay awooddii madaxweynenimo, iyo 2) - Inuu horjoogsaday codsigii Congress-ka ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu goluhu codsaday.
Codbixintii qodobka koowaad ayaa waxa natiijadiisu ahayd 230 mudane oo oggolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo 197 mudane oo diiday. Qodobka labaad ayaa waxa taageeray 229 mudane, halka 198 mudane oo iyagu diideen.
Hoos ka dhageyso warbixino ku saabsan taariikhda xil-ka-qaadis ee Mareykanka, fallanqeyn, iyo aragtida Soomaalida Mareykanka.
Aqalka Wakiilada oo ansixiyey xil-ka-qaadista Trump